Zangaphakathi nezangaphandle LCD izikrini kwenhlangano ukuze BlackBerry 8220 / 8230 Pearl Flip — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Zangaphakathi nezangaphandle LCD izikrini ayengasetshenziswa inhlangano BlackBerry 8220 / 8230 Pearl Flip — smartphone ingxenye — ukubonisa ulwazi ngalolu imodeli kukhona ezimbili isibonisi BlackBerry: oyinhloko (kwangaphakathi) nokwesibili (yangaphandle). Isibonisi (bonisa) — kusukela English "isibonisi", ukubonisa esemqoka yakhelwe ukusebenza nge umshini, futhi isaziso eyengeziwe.
Izici Zabantu main (yangaphakathi) isikrini BlackBerry 8220 / 8230 Pearl Flip:
Diagonal of 2.6 amayintshi
Ukulungiswa 240 × 320 Amaphikseli
I kwabantu of 154 Amaphikseli intshi ngayinye
Izici ezengeziwe (zangaphandle) esibukweni:
Ovundlile 1.6 amayintshi
Ukulungiswa 128 × 160 Amaphikseli
Ukubukeka kwesilinganiselo 4: 5
I kwabantu of 128 Amaphikseli intshi ngayinye
Qaphela onobuhle 8220 futhi 8230 ehlukile, izibonisi engahambelani. Khetha inguqulo efanele. Uma ungabaza, sicela uthintane umxhumanisi wethu.
Zangaphakathi nezangaphandle LCD izikrini kwenhlangano ukuze BlackBerry 8220 / 8230 Pearl Flip, Ngaphandle umbala, ngoba 8230 8220LCD-IA-8230 ●
Zangaphakathi nezangaphandle LCD izikrini kwenhlangano ukuze BlackBerry 8220 / 8230 Pearl Flip, Ngaphandle umbala, ngoba 8220 8220LCD-IA-8220 ●
Ngaphandle umbala, ngoba 8230 8220LCD-IA-8230
Ngaphandle umbala, ngoba 8220 8220LCD-IA-8220